रोग लाग्न नदिने के गर्ने ? यस्ता छन् काइदा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
रोग लाग्न नदिने के गर्ने ? यस्ता छन् काइदा
बर्षायाम छ । यतिवेला विभिन्न किसिमको संक्रमणको भय रहन्छ । शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले सानोतिनो संक्रमणले पनि निकै दुख दिन्छ ।
खासगरी शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको कमी भएमा यस्ता संक्रमण हुने गर्छ । शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुन नदिन यी उपायहरु अपनाउन सकिन्छ ।
पानी आफैमा प्राकृतिक औषधी हो । पर्याप्त मात्रामा पानीको सेवनले शरीरमा जमेको विषाक्तलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ । जसका कारण रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि हुने गर्छ । तर पानी खाँदा सकेसम्म सादा पानी वा उमालेको पानी खानुपर्छ । फ्रिजमा राखेको पानीले शरीरमा हानी पुर्‍याउने गर्दछ ।
मौसम, सुन्तला लगायतका रसिलो फलफूलमा भिटामिन सीका साथै भरपूर मात्रामा खनिज तत्व पाइन्छ । यसले शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । फलफुल सिधै, काटेर वा त्यसको जुस बनाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । यस्ता फलफुल नुन वा चिनीको विना नै सेवन गर्नु उपर्युक्त हुन्छ ।
स्वस्थ शरीरका लागि हास्न जरुरी छ । हास्नाले शरीरमा रक्तप्रवाह प्रभावकारी रुपमा हुने गर्छ । त्यस्तै, शरीरमा अक्सिजनको पूर्ति राम्ररी हुन्छ । साथै यसले रिस कम गर्नुका साथै तनावलाई समेत कम गर्दछ । त्यतिमात्र हैन, यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत बढाउने हुदाँ दिनमा धेरैभन्दा धेरै हास्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक मानिन्छ ।
हरेक दिन नियमित तालिका अनुसार खानेकुरा सेवन गरौं । खानेकुरा सुपाच्य, सन्तुलित होस् । तर, एकै पटकमा थरीथरीका खानेकुरा सेवन नगरौं । बरु दिनभरमा पटक(पटक थरीथरीका खानेकुराको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । विजातिय खानेकुरा सेवन नगरौं । सकेसम्म सात्विक भोजन लिनुपर्छ । मसला कम भएको, शाकाहारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
केहि समय घाममा
झुकेर, खुम्चिएर बस्नु हुँदैन । यसरी बस्दा शरीरका भित्री अंगहरुको कार्य संचालनमा बाधा पुगिरहेको हुन्छ । सोझो वा मेरुदण्डलाई सिधा बनाएर बस्नुपर्छ ।